यो कुराले गर्दा उनीहरुसँग भेटघाट गर्थे
घर » ब्लग »5कसरत विचारहरू विचार गर्नुहोस्
कुनै पनि कुरा तपाईं काम गरिरहनुभन्दा कति लामो समयसम्म, प्रत्येक व्यक्तिसँग दिन छ जब उसले जिम जाने जस्तो महसुस गर्दैन। त्यस्ता दिनहरूमा, बिस्तरमा बस्न सजिलो छ र अलार्ममा स्नुज बटन हिट गर्न सजिलो छ। यद्यपि, तपाईं आफैलाई राख्न को लागी प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ काम गर्दै दायाँ कसरत गियर खरिद गरेर।
कसले नयाँ जूताको जोडीलाई घृणा गर्छ? यदि तपाईं केही प्रेरणा चाहनुहुन्छ भने, तपाइँलाई स्टोकरहरूको उज्यालो जोडा आफ्नो कसरत गियरमा थप्न आवश्यक छ। यदि सम्भव छ भने, तपाईंले एक जोडाको छनौट गर्नु पर्छ जुन तपाईंको व्यायामशालाको धेरै भन्दा मिल्दो संग मेल खान्छ। जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ, तपाई आफैंको बारेमा राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र जिम हिट गर्न तयार छ बिहानको पहिलो कुरा।
यदि तपाइँ उज्ज्वल जूताहरू मनपराउनुहुन्छ भने, तपाईले जिम बाहिर पनि पहेलो लगाउन सक्नुहुनेछ। के तपाईलाई सही जोडा उठाएर केही मद्दत चाहिन्छ? तपाइँले आफ्नो स्थानीय खेलकुद भण्डारको हिट गर्नु पर्छ र यसको सहभागी मध्ये एक सहयोगको लागि सोध्नुपर्दछ। एक स्टाफ सदस्यहरूले तपाईंलाई सही जोडा पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ जसले तपाइँको खुट्टा स्थान र विशिष्ट स्ट्राइकसँग मेल खानेछ।
यदि तपाईं आफ्नो छनौटको रंग फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले अनलाइन जाँच गर्नुपर्छ। जब बेल्टहरू अनलाइन गलत खरीद गर्नबाट बच्नको लागि तपाईंलाई सावधान रहनु पर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईँले साइज चार्टहरू हेर्नुहोला किनकि तिनीहरू सबै समान छैनन्।
तपाईंले कसरत कपडाहरूमा लगानी गर्नु पर्छ जुन तपाईं जिम बाहिर जान सक्नुहुन्छ। जब तपाईं नरम पसीर लगाउनुहुन्छ, तपाईलाई महसुस गर्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ कि तपाईले नरम कम्पासमा राख्नुभयो। यदि जिमको लागि परिवर्तन गर्दा तपाईलाई समय बर्बाद गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो पसीरको काममा काम गर्नुपर्दछ किनभने कार्यस्थलको ड्रेस कोड कम सख्त भएको छ।
यदि तपाईं काम गर्न पसीर लगाउनुहुन्छ भने, तपाइँ जिम हिट गर्नु अघि 10 मिनेट परिवर्तन गर्न बर्बाद गर्नुपर्नेछ। यसबाहेक, जिम बाहिर आफ्नो कसरत लुगा लगाएर तपाईंलाई दिनभरि सजिलै सारियो। जब तपाइँ सहज लुगा लगाएका छन्, तपाईले हिड्नुको सट्टा सीढीहरू चलाउन बढी उत्प्रेरित गर्नुहुनेछ।
उनीहरूको बहुमुखीताको लागि धन्यवाद, लेगिंगहरूले कसरत कपडाबाट फैलिएको स्ट्यापमा स्नातक गरे। खरीदारी गर्दा, तपाईं सिन्धुपाल्चोकहरूमा आउन सक्नुहुन्छ जुन धेरै क्षमाशील, उच्च ढाँचाहरू, चौडा कमरहरू, र नरम कपडाहरू छन्। यदि मौसम सुस्त र चिसो छ भने, तपाईं आफ्ना आत्माहरू ल्याउनको लागि उज्ज्वल लेगिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ अनलाइन लिङ्गहरूका जोडीको लागि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई आफ्नो सटीक माप जान्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं bespoke लेगिंगहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै तर,, तपाईंले आफ्नो सटीक माप प्रदान गर्नुपर्दछ।
तपाईं जिममा एक पागल माथि पहने गरेर आफ्नो चौंकानेवाला पक्ष देखाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा केही चिसोहरू चकित हुन सक्छ र साथी जिम ब्रोकरहरू कुराकानी गर्न सुरु गर्न सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक स्लग छान्नुहोस् जुन तपाइँसँग बोल्नुहुन्छ र तपाईंको भावना देखाउनुहुन्छ। तपाईं रैकबाट यस्तो माथिल्लो किन्न सक्नुहुनेछ वा विशेष गरी तपाईंको लागि बनाउनु भयो।
तपाईंले एक अनूठा स्नोजन चयन गर्न आवश्यक छ जसले तपाईंलाई आफ्नो सामानलाई स्ट्रिट गर्न र तपाईंको व्यक्तित्वलाई फिट गर्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं म्यानमा आफ्नो शीर्ष को एक झलक पकड़ जब तपाईं हँसिलो गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो आत्माहरू उठाउन सक्षम हुनेछ।
सम्पीडन मोजेहरू घुटेर माथि जान्छ तपाईंको खुट्टामा परिसंचरण बढ्नेछ र तपाईंलाई राम्रो लागी बनाउनेछ। यसबाहेक, तिनीहरू भाइरस नसका रोकावटको लागि उत्कृष्ट छन् र जिममा आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्न सक्छन्। सम्पीडन मोजेले पनि तपाईंको मांसपेशी ऊतकमा तरल पदार्थको संचयलाई रोक्न, जुन वास्तवमा एक राम्रो कुरा हो जुन मांसपेशिहरु कसरत पछि प्रसन्न हुन्छ।
यदि तपाईं सोचिरहनुभएको छ कि क्या जिममा शर्ट्स वा लेगिंगहरू लगाउने हो भने, सम्पीडन मोजेको जोडीलाई तपाईंको निर्णय सजिलो बनाउनेछ। यदि तपाईं काममा रहँदा सधैंका खुट्टामा काम गर्नुहुन्छ, तपाइँले तपाइँको सम्पीडन मोजेहरू काम गर्न मन पराउनुपर्दछ। यस तरिका, तपाईं तिनीहरूलाई लामो समयसम्म हुनेछ, अर्थ भनेको तपाईंले अधिकतम लाभहरू कटाउनुहुनेछ।
सस्ती, मजा, र आरामको कसरत गियर तपाईंलाई अनुमति दिनेछ आफ्नो फिटनेस लक्ष्यहरूमा पुग्नुहोस् कुनै समयमा। यसबाहेक, तपाईं आफैंको बारेमा अझ राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ, जसको मतलब तपाईं स्वस्थ जीवनशैलीको लागि आफ्नो मार्गमा रहनुहुनेछ।